संविधान नबन्नुको कारण
टीकाराम भट्टराई : संवैधानिक विधिशास्त्रमा संविधान बनाउने मुख्य दुई तरिकाहरू हुन्छन भन्ने कुरा स्थापित मान्यता हो । ती तरिकाहरूमा प्रक्रियाप्रधान तरिका र विषयवस्तु(प्रधान तरिका हुन् । यी दुईमध्ये संविधानसभाबाट संविधान बनाउने तरिकालाई प्रक्रियाप्रधान तरिका भनिन्छ । अर्थात यो तरिका विषयवस्तु(प्रधान तरिका हुँदै होइन । हिजोको विद्रोही शक्ति र जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूले यही प्रक्रियाप्रधान तरिका रोजेरै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निक्र्योल गरेका हुन् । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित दर्जनौ सम्झौता र सहमतिहरूमा यो प्रक्रियाप्रधान तरिकाबाट जारी हुने संविधानमा के(के विषयहरू रहने भन्ने संविधानका अन्तरवस्तुबारे कुनै पनि विषय निर्धारण गरिएको थिएन । अझ बढी पढ्नुहोस्...
संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली तयार गर्न प्रस्ताव समिति गठन गरेको घोषणा गरेपछि एकीकृत माओवादीसहितको विपक्षी मोर्चा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानसभाबाट बाहिरिएपछि नेपाली राजनीति थप ध्रुवीकरण भएको छ। एउटा सत्तारूढ घटकसँग सम्बद्ध रहेका सभाध्यक्ष नेम्बाङले पनि पदीय मर्यादाअनुरूप निष्पक्ष ढंगले संवाद र सहमतिको सम्भावना खोज्नुको साटो ध्रुवीकृत राजनीतिलाई नै बल पुर्‍याउने किसिमले कदम चालेका छन्। अझ बढी पढ्नुहोस्...
संविधानसभा औचित्यहीन भएकै हो ?
राधेश्याम अधिकारी : २०३३ सालमा नेपाल फर्केपछि बीपी कोइराला चावहिलको घरमा प्रत्येक बिहान विभिन्न तप्काका व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्थ्यो । बिहान जानेमा केही निश्चित व्यक्तिहरू पनि थिए । बिहानको भेटघाटको प्रसङ्ग जहिले पनि एउटा प्रश्नबाट सुरु हुन्थ्यो, आजको गल्ली हल्ला के छ ? त्यही गल्ली हल्लाबाट आफ्नो छलफललाई उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो ।संविधानसभाको गतसाता भएको हुलहुज्जत धेरैको सम्झनामा ताजै छ । कसैले बिर्सन खोजे पनि कुनै न कुनै टेलिभिजन च्यानलले त्यो दृश्यलाई देखाइहाल्छन् । संविधानसभाले संविधान लेखिसक्नुपर्ने भनी आफैंले तय गरेको अवधिभित्र संविधान त दिनसकेन नै, त्यसको साटो समग्र संविधानसभाप्रति नै निराशा बढ्ने कार्य हुलहुज्जतमार्फत हुनपुग्यो । अझ बढी पढ्नुहोस्...
नरहरी आर्चाय: संविधानसभाभित्रका पछिल्ला घटनाले संविधान निर्माणको कार्यलाई गम्भीर चुनौतीका अगाडि उभ्याएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन (२०७०) र त्यसपछि पनि राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न हुनसकेन । माघ ८ को मिति निर्धारण, संवैधानिक सीमा थिएन, तैपनि यसको उल्लङ्घनले तत्कालका लागि दलहरूका निम्ति राजनीतिक अन्योल र द्विविधा थपेको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...
किशोर नेपाल: सञ्चार माध्यमहरूको मुख्य पृष्ठमा नयाँ संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानका अन्तरवस्तु जस्ता शब्दहरूले सर्वाधिक प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । पक्कै पनि यी शब्दहरू सामान्य जनतामा संविधानसभाका सदस्यहरू संविधान लेख्ने काममा गम्भीर भएर लागेका छन् भन्ने भान पार्न यथेष्ट छन् । अझ बढी पढ्नुहोस्...
नवीन झा: मधेस विद्रोहको ८ वर्ष पूरा भएको छ । ०६३ साल माघ १ मा अन्तरिम संविधानमा संघीयता नभएको भन्दै संविधान जलाएर सुरु भएको मधेस विद्रोहले अन्तरिम संविधान संशोधन गराई संघीयता उल्लेख गराएको थियो । तर, संघीयताका लागि त्यत्रो विद्रोह भएको आज ८ वर्ष पूरा भइरहँदा नेपालको पूरै राजनीति संघीयताकै विवादमा रुमलिएको छ । मधेस विद्रोहले अघि सारेको समावेशीसहितको संघीयताको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको त होइन भन्ने आशंका मधेसी जनतामा बढेको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...